Igazi lomuntu - yezinto eqolo, ngoba alikho analogue okugcwele esikhundleni. Yingakho abantu lona nabanye, yinhlonipho, nodumo lonke udumo. Yini bakutholele ke? Ixhunyiwe isihloko "anikelelwe Honorary of Russia", "Veteran Wezabasebenzi", yini edingekayo ukuze uthole kubo? Kulula ukuqonda.
Zonke izakhamuzi wesithathu iplanethi ekugcineni lidinga igazi. Futhi uma ucabangela iqiniso ukuthi ngokuphelele esikhundleni ngokugcwele futhi iphephile abekho, kwakha isidingo esikhulu. Ngisho abantu basendulo babekholelwa ukuthi igazi lomuntu enempilo kungaba ukwelapha lesi sifo, kodwa umkhuba, ukumpontshelwa lokuqala yimpumelelo kwenzeka kuphela ekhulwini XVII.
Ekuqaleni, ososayensi baye bazama ukumpontshelwa ezilwaneni ukuze abantu, kodwa ngemva uchungechunge ukwehluleka zokuhlolwa okunjalo zivinjelwe. Ngemva ecishe ibe ikhulu baye kuvuselelwe. Ngalesi sikhathi ama-exchange kwenzeka kuphela kubantu futhi ngokuvamile manipulations yezokwelapha ukusindisa izimpilo zeziguli. Nokho izinga ukwehluleka sisalokhu siphakeme kakhulu, futhi ukumpontshelwa sasibhekwa njengophawu lokuthi inqubo ingozi kakhulu. Ekuqaleni kwekhulu XX kwatholakala amaqembu igazi, futhi kwaba intuthuko yangempela. Manje, iziguli angahlolwa kungasebenziswa, lokho kukunciphisa ngokuphawulekayo ukudleka amathuba nemiphumela enqabayo esiphansi.
Ngemva kwalokho, odokotela bangase kuphela ufunde indlela alondoloze igazi ukuba inqolobane yakhe ngoba izenzakalo ezingalindelekile. Ngesinye isikhathi, futhi waba ngokoqobo, kungenzeka ukuba phaka umkhankaso ezinkulu ukuheha kubanikeli. EYurophu lehla ngokushesha inani kanye umsebenzi onjalo-United States linesici zithandwa, kodwa ngenxa yokuntula igazi cishe kungenzeki.
Esikhathini Russian Federation, uma iqhathaniswa naso West, izinkomba akuzona njengoba okusezingeni eliphezulu, kodwa kancane kancane abantu bayavisisa umthwalo wabo emphakathini. Ngokusho abahlaziyi, ngokuba operation evamile inani abaphi ohlelweni lokunakekelwa kwezempilo idinga ukuba 40 1000 abantu. Phakathi no-2008, lesi sibalo eRussia lezwakala 14. kuphela Nakuba thina sikude ilitshe izibalo, ngezinye izikhathi bayantuleka sina lalolu ketshezi oluyigugu, kodwa kanye wavula federal "Igazi inkonzo", isimo siqala ukuba ngcono. Mayelana 70% abantu eRussia donor engaba khona abadlula le nqubo akuyona okokuqala futhi njalo.
Inthanethi, i-TV, abezindaba - ukuze popularize imicabango kanjani ngokushesha futhi kalula ukusindisa ipilwakhe, wedlula igazi, nokuthi udinga ukwenza umgomo walo. Abantu baqala ukuza ukumpontshelwa esiteshini ukusiza abanye, ezinye zazo ngalifunda uhlu Izimo kanye nezincomo, hhayi abanjwe. Namuhla abantu abaningi benza umsebenzi omuhle njalo, futhi abaningi kubo bagcina ukuthola ukunikela ngezitho zokuhlonipha Russia. Kodwa endleleni eya le ndondo lide ngempela, nakuba, futhi iqala esisodwa.
Qala ngegazi silula - udinga ukuza isikhungo nge ipasipoti lalo. Ngokushesha ngaphambi inqubo uzodinga ukuhlolwa udokotela futhi uyohlola, ngalo lesi siphuzo ngokuvamile ahlinzekwa itiye amabhisikidi ukuya egumbini ekhethekile. Akubalulekile ukuza esiswini esingenalutho, ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuba adle, kodwa imenyu lokuthi yosuku phambi ukulethwa izidingo ezikhethekile - kufanele ngaphandle kusukela ekudleni kwanoma yimuphi umkhiqizo isilwane futhi ukudla okunamafutha ngoba nje ungenza igazi engafanele igazi. Futhi, udinga uyeke utshwala ukuthatha imithi ethile. Kukhona ezinye Izimo, lapho khona kufinyeleleka blood donation akunakwenzeka.
Phela imicikilisho kuyaqedwa, lokuthi uya ehholo, lapho kukhona ucingo. Ngosizo oyinyumba amathuluzi alahlwayo abahlengikazi ukunikeza ukufinyelela vein futhi eqoqwe in a iphakethe ekhethekile 450 ml lonke igazi. Ngisho encane ingxenye uzoya ukuhlolisisa ngokucophelela. Emashumini eminyaka amuva, futhi kube umnikelo ethandwa kwezakhi zegazi lapho ukuvunwa oketshezini olungenambala olusegazini noma izinhlayiya zegazi kuphela kuphela. Lokhu kwenzeka ngosizo kumadivayisi ekhethekile, ukuqinisekisa ukwehlukana zayo ingxenye.
Ngemva igazi iminikelo yokuqala usuphothuliwe, musa uphumule. Uma, ngemva lo muntu ngeke isavela kule isikhungo sokwelapha, konke kuyoba yize. Ngemva kwesikhathi esithile, uma isimo impilo donor kuqinisekisiwe, igazi uzobe ilahlwe.
Labo abaye banikela ngegazi labo, wafaka ezinye isinxephezelo. Ngaphandle kweqiniso lokuthi kwabathile bathole isihloko "anikelelwe Honorary of Russia" ne izikhathi, kukhona ezinye izinzuzo, okuhloswe ukuthi ukhuthaze abantu khona iziteshi ukumpompela.
Ngokusho umthetho isiRashiya, zikhona izikhathi ezimnandi ezilandelayo:
ngempelasonto engeziwe. I donor inelungelo 2 izinsuku ezengeziwe ikhefu ngayinye umnikelo igazi, omunye okumelwe avele ngqo usuku inqubo.
isinxephezelo Monetary noma izitembu ukudla. nokuthuma Mahhala ukuthola ethile, okuthiwa sisetshenziselwe ukubuyiselwa amandla.
Okuphoqelekile ngihlolwa njalo. Ngaphandle kweqiniso lokuthi ngaphambi kokuba isitho ngasinye iminikelo igazi labetibambile ukuhlolwa jikelele ukuthi kungembula anaemia noma izifo, lokuthi kuyadingeka ukuba ibhekane i ngihlolwa yonyaka. Lokhu kukuvumela ukuhlonza yimuphi izifo ezingathi sína kuzo lapho kusaqalwa, lapho abelaphe lula kakhulu.
Kunengqondo ukuphetha ngokuthi izinzuzo akuzona okungaka. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, ungase futhi uthole 'anikelelwe Honorary of Russia ", bese, ngaphansi kwezimo ezithile ungaba Izinzuzo ebaluleke kakhulu.
Nokho, futhi ukuze sikwazi ukusho ukuthi abantu banikela ngegazi yabo njalo ahlupheke futhi ulahlekelwe impilo. Izibalo isho okuphambene - kwasekuqaleni, umzimba "ifunda" akha ekulahlekeni, okungukuthi, uma onikelayo evelelwa uhlushwa ingozi, cishe ziyothambekela kakhudlwana ukuze baphile kunalawo umuntu ovamile. Futhi okwesibili, "buyekeza" njalo igazi futhi kukunika pluses.
donor Honorary Russia
Lesi sihloko akezi mahhala - kufanele kusetshenzelwe, enika igazi labo njalo ukuhlupheka. Kodwa futhi izinzuzo sinikeza abalulekile angabacwasi. Owandulela lolu Isihloko "donor Honorary wase-USSR", yethulwa ngo-1944. Kuze 1991, le ngemvume abantu abangaphezu kuka-170 eziyinkulungwane kwanikezelwa. Ngakho, yini okudingeka ukuthola ukunikela ngezitho zokuhlonipha Russia? Vele ukudlula igazi eliningi.
Okwamanje, kukhona kuphela umbandela ambalwa, owasungulwa ngo-1983. Ukuze uthole isihloko donor zokuhlonipha Russia, kudingeka uvivinye umzimba 40 kuya ku-60 nezikhathi iminikelo noma kudlule plasma. Ngo-2013, izinguquko umthetho, imithetho ukubala aye hlandla. Manje labo babe 25 lonke igazi iminikelo, ungaqhubeka ukuthatha plasma. Futhi uzoba nelungelo ukuba ibheji, lapho inani eliphelele uyofinyelela 40. Kwelinye icala phambi imiklomelo kuyodingeka ukuba zinikele 60.
Kufanele kuqashelwe ukuthi kunoma yisiphi isimo ngaso sonke isikhathi libhekisela kuphela umnikelo, lapho kufanele kuphela ukuthola ababasekelayo ngaphandle ukukhokha amaholo.
Akukhona nje uthole isitifiketi "anikelelwe Honorary of Russia". Ilungelo lesi sihloko uyaziqhenya kuyadingeka ukufakazela ngokuphindaphindiwe, ngalesikhatsi kuchutjekwa nekwenta banikela ngegazi mahhala okungenani izikhathi 3 ngonyaka. Kuphela kuleli cala, izilinganiso of ababasekelayo izoqhubeka isebenze.
Uma ungenalo ukufakazela bubuhle bawo ekunikeleni umphakathi, ngeshwa, ungalahlekelwa sengqondo kakhulu. Ngakho yiziphi izinzuzo ukunikela ngezitho zokuhlonipha Russia inikeza isimo? Kungakhathaliseki ukuthi abaphikisi bangamalungu ukuthi phezu 10-15 iminyaka njalo ukuza ukumpontshelwa esiteshini?
Ngemuva kokuvela krovosdach idlula umthetho kahulumeni № 125-FZ ezingeni lokuthi inelungelo esicongweni ekhethekile. Leli bheji iye yaklonyeliswa kusukela ngo-1995 futhi kuhambisana nezinye ezimnandi amalungelo akhethekile ngokwanele eziningana. kukhona phakathi kwabo:
ilungelo kufunwe ukuhlinzekwa sekhefu lonyaka ngesikhathi esikahle lapho wamemezela ukuba ukuhlela ngeke;
kungenzeka ukwelashwa ezindaweni zokusiza ngezempilo zomphakathi umugqa ezivamile;
kuqala ilungelo ukunikeza izaphulelo okukhethekile ukuze sanatoriums.
Thola noma iyiphi yalezi izinzuzo kudinga isimo imibhalo njengoba isitifiketi donor zokuhlonipha Russia nase-passport. Ngezinye izikhathi yokubhalisa wamaphepha edingekayo kuthatha isikhathi esithile, ngakho ngaso sonke isikhathi ukuthi ngokushesha basebenzisa izintandokazi. Ngaphezu labo izici isimo ukuthi ebekiwe emthethweni Federal, kukhona labo isinyathelo ezingeni lesifunda. Kamuva ngabo, it kuzoxoxwa isibonelo eMoscow.
Phakathi kwezinye izinto, kukhona enye into, ukuthi yini ilungelo ohloniphekile donor Russian. Veteran Wezabasebenzi - isihloko (nazo zonke amalungelo elikulo), okungase babelwe umuntu ngegazi njalo, ngoba umhlalaphansi ngomuzwa ezifanele.
Ngegalelo lakhe elingenakuphikwa ukuthi impilo isizwe, ngamunye kubantu eminyakeni zidele igazi labo libe unelungelo umvuzo wemali yonyaka. Ngezinye izinzuzo ezifanayo donor zokuhlonipha Russia ngo-2014 akuzange zehluke izintandokazi kwalabo abamukela isihloko ngokushesha noma kamuva - lemali iwukuba bonke okufanayo, futhi ngokuvamile ngokobungako. Ngaphezu kwalokho, esanda esikhokhelwayo, kungakhathaliseki ukuthi ngenyanga ngenhla ukuhleleka bhunga isihloko, futhi isikhathi ngaphambi Apreli 1 unyaka ngamunye. Ngo-2015 sasifana nokuthi ruble 12 373. Kuyacaca ukuthi ekukhokhweni donor zokuhlonipha Russia neSoviet Union akuyona omkhulu kangaka, bebe bengewona kodwa kwalokho nice ukugcwaliseka iwusizo lalo. Futhi lo muzwa cishe kuyinto lunqume.
Honorary donor eMoscow
Inhloko-dolobha ye Russian Federation unika abantu banikele ngegazi njalo, ngisho lotifunako. Kulokhu, isihloko ingatholakala edlulisa igazi noma uketshezi olungenambala olusegazini izikhathi 20 30. uhulumeni Moscow unika abanikeli zokuhlonipha izinzuzo ezilandelayo:
Umklamo ikhadi yokuphepha komphakathi kanye ilungelo travel khulula on izithuthi zomphakathi;
50% isaphulelo on payment for services ethile yomphakathi;
kuzuzisa yokufuna inombolo yemithi;
Isaphulelo zokususwa nokulahlwa kwendle okuqinile;
enza khulula noma ukukhanda amazinyo okufakelwa, ngaphandle nalabo abenziwe amatshe ayigugu.
Zonke lezi izinzuzo kulabo umhlatshelo igazi labo, besahlala enhlokodolobha. Ngamanye izifunda Russian Federation ongasebenza izintandokazi zakho esabekwa umthetho wendawo.
Kuyini nokwahlulelwa okungenabo ubulungisa? Nokwahlulelwa okungenabo ubulungisa eenkambisweni zobulelesi. Ukulungisa amaphutha zokwahlulela
Umsebenzi obekwe umbuso i-passport: ipasipoti ukhethe kahle
I-Resonator ne-vocal chant yezwi
'I-Japanese isimangaliso kwezomnotho'
PRD - kuyini? Idethi elinganiselwe yokulethwa ngosuku nje ebamba isisu
Inyama Thai. Ukwehlukana the iresiphi
Indlela ukususa nemivimbo engu ekhaya?
Izinhlobo ezinkulu izindleko
Sitolo sekudla lokuphekiwe Tverskaya eMoscow: incazelo, isithombe